IHarmonyOS 2.0: IHuawei iphakamisa ukushiya iGoogle | TeraNews.net
IHarmonyOS 2.0: IHuawei iphakamisa ukushiya iGoogle
umbhali Nikitin Eugenius Kushicilelwe ku 06.01.2021
Ngokusobala, "udrako" ubebambele igqubu "ukhozi". Lokhu kufakazelwa iqiniso lokuthi umqondisi weHuawei Yu ChengDong unikeze abafowabo baseChina ukuthi bashintshele kwiHarmonyOS 2.0. Lokho wukuthi, shiya ngokuphelele izinsizakalo zeGoogle. Isitatimende asisho lutho ngenani. Kuvela ukuthi umholi wemakethe yase-Asia iHuawei ukulungele ukuhlinzeka ngezinsizakalo zayo mahhala.
Lokhu kunikezwa okumangazayo nokukhangayo kumenyezelwe kuyo yonke imikhiqizo. Kepha kuhloswe kakhulu ezinkampanini eziye zaba ngaphansi kwezijeziso zaseMelika. IHuawei isiqalile ukuhlola iHarmonyOS 2.0 futhi isilungele ukuhlinzeka ngezinsizakusebenza kulabo esincintisana nabo. Lokhu ngeke kubizwe ngocingo lokugcina lwe-Google. Futhi kucace bha ukuthi iHarmonyOS 2.0 izofika ezingeni leGoogle ngonyaka ozayo.
Isinqumo sikaHuawei nakanjani sihle kubakhiqizi bobuchwepheshe beselula. Futhi nangonjiniyela bohlelo lokusebenza nomdlalo. Kepha ukuthi ukuqaliswa kweHarmonyOS 2.0 kuzoba yini kuma-smartphone nakumathebulethi akucaci. Inkinga ngezinhlelo zamaShayina ayiyona inhloli nhlobo, kodwa ukukhangisa. Futhi angikuthandi ngempela lokhu, okungathandeki kumsebenzisi, ulwazi olungamukelwa ezinye izinkampani.
Ayini amathemba enhlangano yeHuawei
Sekuyisikhathi eside kwacaca ukuthi unswinyo lwaseMelika alusona isithiyo kumaShayina. Ifana kakhulu nesithombe neRussia. Lapho esikhundleni sokuwa emakethe, umbuso waqala ukukhulisa umkhiqizo wasekhaya. Ngokomongo weHuawei, inkampani isiqalile ukuphatha ubuchwepheshe be-3nm. Umsebenzi uyaqhubeka wokwakha iprosesa entsha ye-Kirin 9010. Futhi nokuvimba ukufinyelela emakethe yase-American IT akuhluphi amaShayina.
Impi yokuhweba yaseChina ne-United States iholele amazwe amaningi angazithandi ezombusazwe ezingcolile zaseMelika ukukhetha iHuawei. Futhi lokhu kuyintshisekelo emikhiqizweni yamaShayina nokufakwa kokutshalwa kwezimali emnothweni. Kukholakala ukuthi i-United States ingasusa ngokuphelele yonke imikhawulo, ngoba ukukhula komnotho waseChina kuyinkinga enkulu kubo. Isikhathi sizotshela. Okwamanje, silinde ukukhishwa kweHarmonyOS 2.0.
I-Google TV iyeza - abalandeli be-Android TV bathukuthele
iMac Design Apple Pro Khombisa i-XDR
Kukhonjwe ngesibhamu iHuawei Sony PlayStation neMicrosoft Xbox
I-Xiaomi Mi Air Charge Technology - Ibhokisi likaPandora livulekile
Iyini imfashini yamateki - entwasahlobo-ehlobo ngo-2021
I-Bumper ku-Xiaomi Mi 10T Lite 5G - ekuphishekeleni pragmatism
Ungakuthumela kanjani ngokuzenzakalela ku-Instagram - ithuluzi elilula
I-adaptha ye-USB Bluetooth 5.0 enoxhaso lwe-EDR
I-Bitcoin eNdiya ingakhokhiswa intela ifike ku-30%
I-Deutsche Bank: IJapan ishintsha inkambo isuka ku-Forex iye kwi-BTC
Ihlelo le-0 Euro linyatheliswe eJalimane